गलकोट नगरपालिकाको बजेट ६४ करोड ६२ लाख ८९ हजार::Online News Portal from State No. 4
गलकोट नगरपालिकाको बजेट ६४ करोड ६२ लाख ८९ हजार
नगरपालिकाको घडेरीका लागि २ करोड बिनियोजन
बागलुङ, १८ असार – गलकोट नगरपालिकाले आबमा भवन बनाउने लक्ष राखेको छ । भाडामा बस्दै आएको यो नगरले मंगलवार ल्याएको बजेटमा जग्गा खरिद गर्न बजेट समेत व्यवस्था गरेपछि भवन बनाउने पक्का भएको हो । पाँचौ नगरसभामा उपप्रमुख रेणुका काउचाले मंगलवार बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार बिकासका कार्यक्रममा जोड समेत दिएकी छिन् । आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ का लागि उनले ६४ करोड ६२ लाख ८९ हजारको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । प्रस्तुत भएको बजेटमा आन्तरिक कर तथा राजश्वबाट ३ करोड ३० लाख र संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको ११ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशबाट प्राप््त हुने १ करोड २३ लाख तथा राजश्व बाँडफाडमा संघले दिने ९ करोड ६३ लाख र प्रदेशले दिने ४९ लाख रुपैयाको अनुमान गरिएको छ । चालु बर्षको बजेटमा मौज्दात रहने ३ करोड ८० लाख समेत लाई आगामी बर्षको बजेटमा मिलाइएको छ ।
नगरपालिकाले आगामी बर्षका लागि २ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेर नगरपालिकाको भवनका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष राखेको छ । त्यसपछि आफ्नै भवन बनाउने काउचाले बताईन् । उक्त रकम खर्च शिर्षकमा राखिएको छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षामा १९ करोड ८३ लाख र चालु बर्ष १८ करोड रहने व्यवस्था गरिएको छ । नगर भित्रको पूर्वाधार निर्माण तर्फ पाण्डवखानी देखि रमुवा सम्मका जनतालाई गलकोट सम्म जोड्न ६० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । घरका छाना बिस्तापित गर्ने योजनामा ६५ लाख, हरिचौर बजार व्यवस्थापनका लागि २० लाख, कांडेवासमा पक्की सडक बनाउन ३० लाख, नरेठाँटी बजार व्यवस्थापनका लागि ३० लाख र वडा नं. ४ र ६ का कार्यालय निर्माण गर्न २५ लाखको दरले बिनियोजन गरिएको छ । सबै वडामा बिकासका लागि जाने रकम ८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छ । नगरपालिकाले अघिल्लो बर्ष थालेको आमा सुरक्षा कार्यक्रममा १० लाख रकम बिनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुत्केरी भएका महिलालाई ४ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने निर्णय यस अघिनै भैसकेको थियो ।